Nani oo ka hadlay xaalada Paul Pogba ee Manchester United
Home Horyaalka Ingiriiska Nani oo ka hadlay xaalada Paul Pogba ee Manchester United
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaan waligiis ka fogayn dareenka warbaahinta. Mustaqbalkiisa iyo sida uu ugu heellan yahay kooxda ayaa had iyo jeer su’aal la saaraa tan iyo markii uu saxiixay 2016. xidiga reer France ayaa hal sano oo qura uga harsan yahay qandaraaska uu kula joogo Manchester United wakiilkiisa Mino Raiola ayaa ku adkeysanaya in ku guuleystaha Koobka Adduunka uu ka tagayo Old Trafford dhammaadka xilligiisa.
Pogba ayaa ku riyaaqay qaab ciyaareed fiican intii lagu jiray ololahan wuxuuna udub dhexaad u ahaa Manchester United oo si lama filaan ah ugu guuleysatay horraantii xilli ciyaareedkaan. Waxa uu qayb muhiim ah ka ahaa qorshayaashii Ole Gunnar Solskjaer xilli ciyaareedkii oo dhan ka hor inta ayna dhaawacyo kale soo gaadhin kulankii ay Man United bar-baraha 3-3 la gashay Everton bishii hore.
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United Luis Nani ayaa sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France uu heysto waxyaabo badan oo uu dalbado. Markii uu la hadlayey Stats Perform news, Nani wuxuu yidhi:
Nani ayaa u sheegay Stats Perform News: “Waqtigan xaadirka ah, waxaan u arkaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ah ee Man United kaasi oo kooxda sii joogi kara.
Previous articleJuventus oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho
Next articleManchester United oo mudnaan siin doonta weeraryahan cusub